Wildfire rages north of Athens, one town evacuated Storm Bonnie leaves deadly trail in Central America अष्ट्रेलियामा बाढी: सिड्नीमा बाढी आएपछि ५० हजार मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह प्रमुख नदीहरूको बहाव सतर्कता तह भन्दा तलै रहने
हामी प्रत्येकलाई सफा वातावरण चाहिन्छ । हामी आफु बस्ने सेरोफेरो सफा र स्वच्छ रहोस् भन्ने अपेक्षा गर्छौ तर त्यसका लागि आफ्नो भूमिका के भन्ने चाँहि धेरैले भूलेका हुन्छौँ । शिक्षित छौँ, फोहर व्यवस्थापनका धेरै कुरा बुझ्छौ र पनि त्यसको सहि सदुपयोग गर्न सकेनौ भन्ने सबैलाई ज्ञात छ । हाम्रा गाँऊ शहरका फोेहरका विषय सरकार र संसदसम्म छलफल हुने गरेका छन् कि सहज व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ? धेरैको चर्चा बनिरहँदापनि हाम्रा धेरै फोहर सिसडोल पुग्छन्, यत्रतत्र फ्याकिन्छन् कि त बालिन्छन् । फोहर थुपारेर अनि बाल्ने काम किन हुन्छ ? बालेर व्यवस्थापन, यो कस्तो विकल्प या समस्या भन्ने विषयमा हामीले वातावरणविद् भुपेन्द्र दाससगँ गरिएको कुराकानीको सम्पादिन अंश प्रस्तुत गरेका छौँ ।
हप्ताभरि फोहर घर कार्यलय वा चोकमा थुपारेर राख्यो अनि तालिका अनुसारनै बालेर व्यवस्थापन संस्कार, बाध्यता कि लापरवाही ?
मेरो विचारमा फोहरलाई जथाभावी फ्यालेर वा बालेर व्यवस्थापन गर्नु अल्पज्ञानको गतिलो उदाहरण हो । हामी आफैले विभिन्न स्वरुपमा फोहर उत्पादन गर्छौ भने त्यसको उचित व्यवस्थापनको पहिलो दायित्व हाम्रो हो । अहिले धेरै ठाउँमा फोहर फाल्ने र बाल्ने काम जुन भएको छ यो सरासर गलत हो । व्यक्ति, समाज, सरकार वा अन्य सरोकारवाला निकायले यो बुझ्नु आवश्यक छ । फोहरमैला बालेर न्युनीकरण गर्दा प्राविधिक पक्षमा ध्यान गएको छैन । छिटो व्यवस्थापन गर्न फोहर बाल्ने संस्कार, बाध्यता भन्दापनि लापरवाही हो ।
Source:Das et al., 2018
यत्ती फोहर बालेर के हुन्छ ? एकैछिनमा खरानी भईहाल्छ नि भन्ने जमात भेट्छौ के भन्नुहुन्छ ?
यस्तो केहि पनि नागरिकलाई सोच्नु हुन्छ भने त्यो फोहर बाल्दाको नकारात्मक असर नबुझेको हो । धेरैले क्षणिक सजिलो लागि गर्नुहुन्छ तर त्यो विकल्प होईन् । फोहरको वैज्ञानिक र प्राविधिक पक्षबाट हेर्ने हो भने फोहर बाल्दाखेरी निस्केको धुवाँमा कार्वनडाईअक्साईड, कार्वन मोनोअक्साईड, पिएम २.५, मिथेन, सल्फरअक्साईडजस्ता तत्वहरु निस्कछन् जसले वातावारणमा प्रत्यक्ष असर पारेको हुन्छ । फोहर बाल्दा आएको धुवा वायुमण्डलमा मिसिदा त्यसले मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा जलवायु परिवर्तनमा असर पारेको हुन्छ । कार्वन मोनोअक्साईडले मानवको रगतमा हुने अक्सिजनको मात्रा घटाउछ ।
धेरै नेपाली विहान बेलुका चुलोमा काठ दाउरा बालेर धुवामा बसेकै हुन्छन् । उस्तै हो नि धुवा भनेको सुन्छौँ ?
फोहर बाल्दा निस्केको धुवामा विभिन्न रसायनिक तत्व उत्पादन भएको हुन्छ । चुलोमा बाल्ने काठ दाउराबाट निस्कने भन्दा फरक हुन्छ । फोहरको धुवाले मानव स्वास्थ्यमा विभिन्न रोगका सक्रमण निम्त्याउछँ । फोक्सोको क्यान्सर, मुटु रोग, आखाँमा सक्रमण, गभर्वती महिलाको हकमा झन् संवेदनशिल, जन्मने वच्चामा समस्या देखिन सक्छ । सामान्य नागरिकलाई श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने, वान्ता हुन,े रिगंटा लाग्ने जस्ता विभिन्न रोगका लक्षणहरु देखिन्छन् । मानव स्वास्थ्यमा भएका समस्याहरुलाई विभिन्न अध्ययनले पनि पुष्टि गरिसकेको छ ।
फोहर त व्यक्ति, संस्था सबैले बालेकै हुन्छन् । सडक किनारामा बालेका प्रशस्त उदाहरण छन् नि ?
फोहरलाई फोहरको रुपमा चित्रण गरिने संस्कारको विकासले समस्या ल्याएको हो । हामीले कहिल्यै फोहरलाई स्रोतको रुपमा हेरेनौँ र त्यसलाई जहाँ जहाँ जसरी हुन्छ फाल्नै पर्छ भन्ने भयो । हो यँहाले भनेजस्तै व्यक्ति संस्था सबैले बाल्ने र फाल्ने काम गरे भने हाम्रो फोहर व्यवस्यापनको तालिका, पद्धती वा प्रणालीमा केहि न केहि समस्या छ । सरकारी वा जिम्मेवार निकायले किन बालिन्छन् त फोहर भनेर अध्ययन गर्दै त्यसको कारण पत्ता लगाउनु पर्छ । वर्तमान समयमा फोहर उत्पादनमा कमि ल्याउन पनि सबैलाई प्रेरित गर्नु आवाश्यक छ । यो चिसो मौसममा हिटर नभएर, किन्न नसकेर फोहर बालेर ताप्ने चलनपनि हटाउनु पर्छ । फोहरको आगो तापेर न्यानेपना पाईदैन । फोहर व्यवस्थापन फालेर वा बालेर हुन्न भन्ने चेतना जगाउनुपर्छ । गरिवि, अज्ञानता, वा अन्य जे कारण भएतापनि फोहर बाल्ने विकल्प दिनु हुदैन् ।
हामीसगँ चेतना वा शिक्षाकै कमि हो ?
फोहर व्यवस्थापनको विषयमा बालेर सजिलै गर्न सकिन्छ भन्ने सोचमा समस्या हो । केहिलाई शिक्षाको पनि कमि हो जस्तो लाग्छ ।
शनिबारका दिन धेरै शैक्षिक संस्था, सरकारी र नीजि कार्यलयका परिसरमा फोहर बालेको धुवा उडेको देख्छौ ?
तपाई प्रश्नमा ठूलो चिन्ता र चिन्तनको विषय लुकेको छ । स्वभाविक रुपमा शैक्षिक संस्थाहरु जसले अन्य विषयसगैँ वातावरण र फोहर व्यवस्थापन पनि पढाईरहेका छन् त्यस्ता संस्थाले बिदाका दिनमा फोहर बालेर व्यवस्थापन गर्नु बेठिकनै हो । हामी नैतिकता, नीति र ऐनलाई बिर्सिरहेको छौँ । सरकारी निकाय, नीजि संघसंस्था र जुन जुन संस्थाले फोहर बाल्ने गरेको छन् उनीहरुलाई फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ को दफा दफा अध्ययन गर्दै त्यसको भावना बुझन् अनुरोध गर्दछु । हामीले अबपनि सुधार नगर्ने हो भने पछुताउनुको विकल्प छैन । मानव स्वास्थ्यमा समस्या देखियो भने धेरै समय र अर्थको लगानी गनुपर्ने हुन्छ । सबैले आफ्ना कार्यलयका कर्मचारीहरुलाई यस विषयमा जानकारी दिलाउनुपर्छ ।
फोहर बालेर बायुमण्डलमा कस्तो प्रभाव हुन्छ ?
यो फोहरमैला बालेपछि वातावरणमा हावा दुषित वा भनौ वायु प्रदुषण हुन्छ । यससगँै तापक्रममा जुन वृद्धि गईरहेको छ । नेपालको सन्र्दभमा प्रतिवर्ष ०.०६ डिग्री सेल्सीयसले तापक्रम प्रतिवर्ष वृद्धि भएको अध्ययनले प्रमाणित गरिसकेको छ । हामीलाई पहिलाको भन्दा धेरै गर्मी महसुस भएको छ ।यो विश्वमा वृद्धि भएको तापक्रमको तुलनामा ६ गुणा बढी हो । काठमाडौ उपत्यका लगायतका स्थानमा हुने वर्षामा परिवर्तन ल्याई बाढी निम्त्याएको छ । हाम्रा हिमालमा पहिलोको जस्तो हिउ देख्न छोडेको छ अर्थात वृद्धि भएको तापक्रमले हिँउ पगाल्न शुरु भएको छ । अहिलो बाली नाली वा कृषिको उत्पादन, पशुपंक्षी वा अन्यमा पनि असर पारिरहेको छ । कृषिका लागि माटोको उर्वराशक्तिमा परिवर्तन र समग्र पर्यावरणमा परिवर्तन ल्याएको छ ।
औसत नागरिकले बेवास्ता गर्ने अनि विज्ञहरुले खतरा देख्ने कस्तो विषय हो यो जलवायु परिवर्तन ?
हाम्रो देशमा विभिन्न र विज्ञ र संस्था मार्फत जलवायु परिवर्तको विषयलाई लिएर थुप्रै अध्ययन भएका छन् । विभिन्न प्रविधि र वैज्ञानिक प्रणालीबाट काम नभएका पनि होईनन् त समस्या कहाँ छ गने अध्ययन प्रतिवेदन र त्यसले मार्गदर्शन गरेका कुरा दराजमै थन्किएर बस्छन् । यो ज्ञान बाड्ने वा व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र चुस्त दुरुस्त राख्न आवश्यक छ । आम नागरिकलाई यसको वातावरणीय र प्राविधिक पक्षका बारेमा जानकारी गराउन विभिन्न संचार माध्यम र तहगत सरकारले अभियानका रुपमा कार्यक्रममा संचालन गर्न सक्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनका विभिन्न पक्षमा भएका अध्ययन र त्यसका निष्कर्षलाई सार्वजनिक गराईनुपर्छ । वातावरणमा वा तापक्रममा भएका परिवर्तन थाह छ तर त्यो हामीले विगतमा बालेको फोहर र अन्य कारणहरुनै हुन् ।
तीन तहका सरकार छन्, उसगँ अधिकार र ऐन छ तर खै कार्यान्वयन ?
यो अहिले हामी सबैले भोगेको परिस्थिती हो । हामी सुधारको मोडमा छौँ । यतिवेला जनमत प्राप्त सरकार छ त्यसैले पनि यस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गर्दछु । फोहर व्यवस्थापनका सम्वन्धमा फोहरमैला व्इवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा व्यवस्था भए अनुरुपको कार्य गर्न सरकार तयार भए सघाउने दायित्व हामी सबै नागरिकको हो । हामीसगँ भएको ज्ञान, सिप र क्षमतालाई आत्मसाथ गर्दै अघि बढेमा परिवर्तन सम्भव छ । आजकै पितिबाट फोहर फालेर र बालेर व्यवस्थापन हुन्छ भन्नेमा सोचमा परिवर्तन ल्याृउन सबैमा आग्रह गर्छु । सरकार वा व्यक्ति एक्लैले केहि हुँदैन यसमा सामुहिक प्रयास, पहल र सहकार्य आवश्यक छ ।
फोहर व्यवस्थापन समस्या कि स्रोत व्यवस्थापनको अवसर ?
यो तपाई वा मेरो मानसिकताले जे बुझ्छ त्यहि हो । हामी कसैले फोहर भनेर फ्याल्यौ भने समस्या हो होईन् यसमध्य कुहिनेलाई प्राङ्गारिक मल बनाउने र अरुलाई पुर्नःप्रयोग गर्न सकिन्छ । यो फोहर नीति नियमले भन्दा नियत र व्यवहारले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले सकेसम्म फोहर उत्पादन कम गर्न, स्रोतमै फोहरको बर्गिकरण गर्न, वैज्ञानिक तथा आधुनिक त्रान र प्रविधिका साथ व्यवस्थापन गर्न सबैमा अनुरोध गर्दछु । यो सबैको सामुहिक प्रयास आवश्यक पर्ने विषय हो । आउनुहोस् सबैले प्रण गरेर सफा र स्वच्छ वातावरण बनाउन प्रयत्न गरौँ ।
अष्ट्रेलियामा बाढी: सिड्नीमा बाढी आएपछि ५० हजार मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह
प्रमुख नदीहरूको बहाव सतर्कता तह भन्दा तलै रहने
बञ्चरे डाँडामा दीर्घकालीन ल्याण्डफिल निर्माण गरिने
शहरी विकास मन्त्रालयले बञ्चरे डाँडामा दीर्घकालीन रुपमा फोहर थुपार्न ल्याण्डफि...